सावधान ! लामो समयसम्म मास्कको प्रयोगले यी रोग निम्त्याउन सक्छ -सावधान ! लामो समयसम्म मास्कको प्रयोगले यी रोग निम्त्याउन सक्छ -
सावधान ! लामो समयसम्म मास्कको प्रयोगले यी रोग निम्त्याउन सक्छ
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०९:३० मा प्रकाशित
एजेन्सी । यदि तपाईं पनि कोरोना भाइरस बिरूद्ध सुरक्षाको लागी मास्क धेरै घण्टाको लागी प्रयोग गरी रहनु भएको छ भने, यो खबर तपाईंको लागि हो। धेरै घण्टा सम्म निरन्तर मास्क लगाएर धेरै जना श्वासप्रश्वास, हृदय र अन्य समस्याहरूबाट पीडित छन्।
चिकित्सा विज्ञान भाषामा यस रोगलाई हाइपरक्याप्निया भनिन्छ। सरकारी दून मेडिकल अस्पतालका चिकित्सक डा। कुमार जी। कौल भन्छन कि मास्क लगाउनु गलत होइन, तर मास्क लगाएर धेरै घण्टा निरन्तर व्यायाम गर्नु स्वास्थ्यको लागि खतरनाक साबित भएको छ।
त्यस्ता केसहरू दुनको क्वारेन्टाइन केन्द्रमा आउँदैछन्। एउटा मास्क लगाएको कारण, मानवबाट जारी कार्बन डाइअक्साइड फेरि मुख र नाकबाट फोक्सोमा पुग्छ । जसको कारणले त्यहाँ यस्ता धेरै समस्याहरू छन्।
यसको कारणले, लामो समयसम्म मास्क लगाउनाले शरीरमा समस्याहरू निम्त्याउँछ। यसले जस्तै जिउ भारी हुने,पसिना आउने, बेहोस हुने इत्यादि निम्त्याउँछ । डा. कौलले भने कि क्वारेन्टाइन् केन्द्रमा यस्तै धेरै केसहरू आउँदैछन्।
ती व्यक्तिहरूलाई मास्क ठीकसँग प्रयोग गर्न र मास्क लागू गर्न सल्लाह दिइन्छ जब यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घरमा सामान्य अवस्थामा मास्क प्रयोग नगर्नुहोस् भन्ने यो आम मानिसको लागि पनि अपील हो। भीडभाडबाट जोगिन र निस्कँदा मात्र मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्।
– आँखा अस्पष्ट वा कम दृष्टि
– टाउको दुखाई र टाउको भारी हुने
– रक्तचाप र मुटुको दर बढ्ने
– बेहोश हुने
यसकारण सिरानी पनि खतरनाक छ, बन्न सक्छ यी रोगहरूको कारण
कोरोनालाई जितेर घर फर्किएकी गर्भवती महिला भन्छिन : आत्मबल बलियो बनाउनुस् निको हुन्छ